Fiiri Warbixinta Sannadlaha ah ee 2018! - Cuntooyinka giraangiraha
Fiiri Warbixinta Sannadlaha ee 2018!
Waayeelka iyo dadka naafada ah ee ku nool metrooyinka magaalooyinka mataanaha ah waxay ogaadaan in haddii ay u baahan yihiin cunno nafaqo leh oo uu bixiyo tabaruce saaxiibtinimo leh, caawimaaddu waa hal wicitaan taleefan ama booqasho websaydhkeenna ah. Taasi waxay umuuqan kartaa mid fudud, laakiin waxay ubaahantahay taageero aad u badan dadka adiga oo kale ah si adeegan muhiimka ah looga dhigo kuwa ubaahan.
Sannad kasta, waxaan jecel nahay inaan aqoonsanno tabarucaadka ballaaran ee xubnaha bulshadeennu ay sameeyaan - cudurdaaridda ciqaabta - sii wado giraangiraha. Waxaan rajeyneynaa inaad qaadan doonto daqiiqad si aad u hubiso Warbixinteena Sannadlaha ee 2018 si aan u aragno waxa ay taageerayaasheena naga caawiyeen inaan ku guuleysano intii lagu jiray sanad maaliyadeedkii ugu dambeeyay (Abriil 2017-Maarso 2018).
Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan la wadaagno warqaddan dib u eegista sanadkii la soo dhaafay oo aan ka sii eegayno Agaasimaheena Guud Patrick Rowan:
Cuntada Lugaha Wayn waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu dheer ee deriska caawiya deriska. Awooddeeda joogitaan waxay leedahay wax walba oo ay ku sameyso dadka adiga oo kale ah. Tani suurta gal ma noqon doonto iyadoo aysan dadku waqti ka qaadin noloshooda mashquulka ah si ay ula xiriiraan deriskooda saacadda duhurkii, iyo iyada oo aan dadku si deeqsinimo leh u taageerin bixinta cuntada ee waayeelka iyo dadka naafada ah ee u baahan.
Markaan dib u milicsaneyno sanadkii la soo dhaafay, waxaa i soo jiitay sida gogosha taageerada ah ee bulshada ay noo oggolaaneyso barnaamijyadayada Cunnada ee Waddankeena si loogu diyaariyo mustaqbal adag. Sababtoo ah deeqsinimadaada iyo taageeradaada aaminka ah, waxaan horay u fiirin karnaa mustaqbal meesha dadkeena waayeelka ah ee deegaanka ay labalaabi doonaan 20ka sano ee soo socota kalsooni aan ka aheyn cabsi.
Waxaan qaadnay tallaabo aad u ballaaran xagga u diyaar-garowga mustaqbalkaas annaga oo u dabaaldegayna sanadki ugu horreeyay ee guuleysta Jikada Fursadaha, jikadii ugu horreysay ee maxalli ah oo si gaar ah loogu talagalay in ay siiso cunno nafaqo leh Cunnada qaatayaasha Wheels ee Magaalooyinka Mataanaha ah. Taageeradaada aaminka ahi waxay na galisay meel aan ku bilaabi karno Jikada Fursadaha isla markaana aan sameyno maalgashi weyn si loo hubiyo joogtaynta Cuntada Gawaarida
Magaalooyinka Mataanaha ah. Dhamaadka sanadka ugu horeeya, jikada waxay u adeegi jirtay 1,400 oo cunto maalintii - ilaa 400 in ka badan intii aan filaynay. Si kadis ah maahan, tani waxay ahayd sanadkii ugu horreeyay taariikhda dhow ee qiimaha cuntada ee loogu adeego bulshada uu hoos ugu dhacay barnaamijyada Cuntada ee Gawaarida ee Magaalooyinka Mataanaha ah.
Ku shaqeynta jikadayada ugu dambeyntii waxay siineysaa marin u helida Cuntada Gawaarida loogu talagalay dadka waayeelka ah, taas oo ku siin karta dammaanad qaad nafaqo leh markii qaar badani la halgamayaan kharashaadka kale ee sii kordhaya ee guryaha iyo kharashyada caafimaad. Laga yaabee tan ugu muhiimsan, inaan noqon karno kuwa u jawaaba dadka aan u adeegno, oo aan siinno noocyada cunnooyinka ay rabaan. Suurtagal maaha in ereyo lagu qoro raaxada ay cunnada aadka loo sugayo keeni karto.
Waxaan rajeynayaa inaad daqiiqad ku qaadan doontid inaad ku aqriso waxa ku lifaaqan Warbixinta Sannadlaha ah oo aad dib u milicsato wax kasta oo aad gacan ka geysatay in aad qabato sanadkii la soo dhaafay. Aniga oo ku hadlaya magaca jaarkayaga waayeelka ah, mahadsanid!
Sebtember 21, 2018